EX - ABSDF: ကျွန်တော့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိတယ် …
မှတ်မိပါသေးတယ် … ကျွန်တော် မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းကပေါ့ … ကျောင်းစုံညီပွဲနေ့မှာ အမေကျောင်းကို ရောက်လာခဲ့တယ် … အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် အရမ်းရှက်ပြီး အမေ့ကို မုန်းတီးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ပြီး ပြေးထွက်လာခဲ့တယ် … နောက်နေ့ ကျောင်းရောက်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက “ မင်းအမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲရှိတာလား?? ” လို့ မေးပြီး လှောင်ပြောင်ကြတယ် … ကျွန်တော် အမေ့ကို ဒီကမ္ဘာပေါ်ကတောင် ပျောက်သွားစေချင်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ် …
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အမေ့ကိုမေးခဲ့တယ် … “ အမေ့မှာ ဘာလို့မျက်လုံးတစ်ဖက်မရှိရတာလဲ?? ကျွန်တော့်ကို တမင် အဟားခံရအောင် လုပ်နေသလိုပဲဗျာ …” အမေက ဘာမှပြန်မပြောဘဲ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ် … ကျွန်တော် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားလိုက်ရသလိုပဲ … ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော် အမြဲပြောချင်နေတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်ရတဲ့ အတွက် စိတ်ထဲပေါ့သွားသလို ခံစားရတယ် … ဒါဟာ ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက် အမေကျွန်တော့်ကို ဘာမှ အပြစ်မပေးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အမေစိတ်ထဲမှာ နာနာကျင်ကျင် ခံစားလိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မတွေးမိခဲ့ဘူး …
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်သမီးငယ်လေးဟာ ကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်ပြီး အိမ်ထဲပြေးဝင်လာပါတယ် … ကျွန်တော် အိမ်ရှေ့ထွက်ကြည့်တော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ် … အဲ့ဒါ ကျွန်တော့် အမေပါ … အမေဟာ အရင်လို မျက်လုံးတစ်ဖက်လပ်နဲ့ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ … “ ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ?? ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုမသိဘူး ” လို့ ကျွန်တော်မသိသလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ် … အကြောင်းက ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကလေးက ကျွန်တော့်နောက်မှာ ရှိနေလို့ပါပဲ … အမေဟာ တဒင်္ဂလောက် မှင်သက်သွားပြီးတဲ့နောက် “တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် … အဒေါ်လိပ်စာမှားသွားလို့ပါ” လို့ အလျင်အမြန် ပြန်ဖြေပြိး လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ် … အဲ့ဒီတော့မှ ကျွန်တော် စိတ်သက်သာရာရသွားတော့တယ် … အမေကျွန်တော့်ကို မသိသလိုနေပေးသွားတော့ နောက်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေးပူနေစရာ ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …
Posted by lu bo at 7:51 AM